HLAZIYA ISIHLAHLA SAKHO NGEBELL KUNYE NEROSS 'BR 05 SKELETON GOLD - UHLOBO
Hlaziya isihlahla sakho ngeBell & Ross ’BR 05 Skeleton Gold
Ukongezwa kwangoku kwi-Bell & Ross 'iqoqo le-BR 05 eliqokelelweyo liyinombolo yegolide ye-skeleton egcwele i-wow factor. Ukuqala ukwaziswa kwiminyaka emibini edlulileyo, i-BR 05 iwotshi yanamhlanje enobudoda, isikwere sokudayela kunye nesacholo sensimbi. Kukho iimodeli ezingama-25 ezahlukeneyo kwingqokelela kwaye ikhawuleza ibe yenye yeewotshi zeBell & Ross. Le nguqulo yamva nje yinto yokutsala amehlo eqinisekileyo yokuba ngomnye umthengisi omkhulu.
Ixabiso eliphantsi lokunxiba kwehalloween emadodeni
Ityala le-40 mm yejiyometri linokubukeka okubukhali, okubonakalayo okugcina izindlu ezibonakalayoI-BR-CAL. 322intshukumo oluzenzekelayo ngoomatshini. Ukucofa ubuso okuvulekileyo kubandakanya ii-indices kunye neeyure ezinamathambo iiyure ezizaliswe ngophawu olumhlophe lweSuper-Luminova. Endaweni yenkangeleko yesiqhelo yentsimbi engenasici, iwotshi isebenzisa i-155 yeegram ze-18k inyuse igolide ukuyinika ukuziva okutofotofo kunye nokuqaqamba.
Intsimbi kunye neRoss
I-BR 05 Skeleton Gold inebhanti yegolide egqityiweyo kunye nepolish enokutshintshiselwa ngentambo yerabha emnyama eyinika umdlalo wezemidlalo. Njengayo yonke iBell kunye neRoss BR 05s, eli xesha linokumelana namanzi ukuya kuthi ga kwi-100m.
Iimpawu zesifuba kubafana abamnyama
Inikwe umda kwiziqwenga ezingama-99 kuphela, i-Skeleton Gold iya kuthengisa ngokukhawuleza, nangona ingezi ngexabiso eliphantsi. Uyakube ufuna i $ 34,700 yewotshi ye-deluxe, kodwa sicinga ukuba kufanelekile ukuba uzuze nzima.
Bona ngakumbi malunga - Amaqela ePanerai aneBrabus ye-Unique Submersible S
ibhabhathane kunye nokuyilwa kwe tattoo
Ingalo yomkhono yesiqingatha semikhono ye tattoo
philippians 4 13 umvambo kunye nomnqamlezo
Umkhono we tattoo ugqume umphambili
I-butterfly yendabuko emnyama kunye nomhlophe
Ukusebenza iintsuku ezi-5 ngeveki iziphumo